Izindatshana zikaJeff Kupietzky mayelana Martech Zone |
Imibhalo nge UJeff Kupietzky
NgoLwesihlanu, Mashi 4, 2022 NgoLwesihlanu, Mashi 4, 2022 UJeff Kupietzky
Imboni yokushicilela ibonakala yenza konke okusemandleni akho emandleni ezincwadi zezindaba ze-imeyili ukuze ibandakanye izethameli futhi iqhube ibhizinisi. Okokuqala, i-Axios yamemezela emuva ngoSepthemba ukuthi yandisa ukusakazwa kwayo kwezindaba zasendaweni ngokwethulwa kwezincwadi zezindaba eziqondene nedolobha eziyisishiyagalombili. Manje, i-Atlantic isimemezele ukwethulwa kweminikelo ye-imeyili emisha emihlanu, ngaphezu kokubhaliselwe kwama-imeyili okukhethekile okungaphezu kweshumi nambili osekuvele kusakazwa. Lokho laba nabanye abashicileli abaningi abakwaziyo yileyo imeyili ehlosiwe
Abashicileli: Ama-Paywalls Adinga Ukufa. Kunendlela Engcono Yokwenza Imali
Ama-Paywall aseyinsakavukela ekushicilelweni kwedijithali, kodwa awasebenzi futhi adala umgoqo emshinini wokunyathelisa wamahhala. Kunalokho, abashicileli kufanele basebenzise ukukhangisa ukuze benze imali ngeziteshi ezintsha futhi banikeze abathengi okuqukethwe abakulangazelelayo mahhala. Emuva ngeminyaka yawo-90s, lapho abashicileli beqala ukuhambisa okuqukethwe kwabo ku-inthanethi, kwavela amasu anhlobonhlobo: izihloko ezinkulu kuphela kwabanye, izinhlelo eziphelele kwabanye. Njengoba bakha ubukhona bewebhu, uhlobo olusha ngokuphelele lwedijithali kuphela
NgoMsombuluko, Novemba 16, 2020 NgoMsombuluko, Novemba 16, 2020 UJeff Kupietzky
Njengabakhangisi, siyazi ukuthi ukubandakanya izethameli ezifanele ngomyalezo ofanele ngaphezulu kwesiteshi esifanele kubalulekile, kepha futhi kunzima kakhulu. Njengoba kuneziteshi eziningi namapulatifomu — kusuka emithonjeni yezokuxhumana kuye kwabezindaba bendabuko — kunzima ukwazi ukuthi ungayitshala kuphi imizamo yakho. Futhi-ke, isikhathi yisisetshenziswa esilinganiselwe — kuhlale kunokuthile okufanele ukwenze (noma ongakwenza), kunesikhathi nabasebenzi ukukwenza. Abashicileli bedijithali bayayizwa le ngcindezi